आफ्नो मृ,तक दाईको न्या’यको लागि एक्लै प्रहरी प्रसाशनसंग ल’ड्ने यी चेलीको शाहसलाई सलाम गर्ने कि…. – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाज/आफ्नो मृ,तक दाईको न्या’यको लागि एक्लै प्रहरी प्रसाशनसंग ल’ड्ने यी चेलीको शाहसलाई सलाम गर्ने कि….
आफ्नो मृ,तक दाईको न्या’यको लागि एक्लै प्रहरी प्रसाशनसंग ल’ड्ने यी चेलीको शाहसलाई सलाम गर्ने कि….
मृ,तकका परिवारले किटा’नी जाहे’री दिएपछि जोरहीका आधारमा प’क्रा उ परेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी वकिलको कार्या लयसम्म पु’र्याएको र ठोस सबुत प्रमाणको अभावमा उनीहरूलाई सफाइ दिएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि मृ,तकका आ’फन्त तथा छिमेकीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी अगाडी प्र’दर्शन र ना’राबाजी गरिरहेका छन्।